Dhaabbileen dhuunfaa (PLC) naannoleef gibira akka kaffalan murtaaye - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Diinagdee Dhaabbileen dhuunfaa (PLC) naannoleef gibira akka kaffalan murtaaye
Gibira PLC sassaabbataa kan ture mootummaa federaalaati
Dhaabbileen dhuunfaa (Kubbaaniyaaleen PLC) gibira mootummaa naannoo keessatti bu’uureffataniif akka kaffalan manni federeshiinii Itoophiyaa murteesse. Woggottan hedduuf, bifa heera biyyattii cabseen, dhaabbileen dhuunfaa gibira kan kaffalaa turan naannoo keessatti bu’uurfetanii osoo hin taane mootummaa federaalaatiif ture. Kuni jalqaba bara 2011 (ALI) irraa eegalee ni dhaabbata.
Naannolleen dhimma kana mormaa turan. Oromiyaan, erga Lammaa Magarsaa filatamee as, addadurummaadhaan saamicha kana mormaa turte. ‘Gibira Oromiyaaf galuu qabu keessaa saantimni takka osoo hin hafin gara Oromiyaatti akka galu godhuu irratti ni qabsoofna’ jedhee ture obboo Lammaan. Kuni amma dhugoome fakkaata. Kuni dhugoomuu isaatiin kan gammaduu fi fayyadamu Oromoo hunda.
Tankaarfiin fudhatame kuni yaalii haqa Woyyaaneen jajalliste sireessuuf godhamu keessa isa tokko. Ammas, gibirri sassaabamu kuni galii Oromiyaa ol guddisa. Sochii misoomaas ni saffisiisa.
Previous articleWoyyaaneen shiraan bulchiinsa Dr Abiyyi gufachiisuu fi abdii jijjiiramaa eebjuu taasisuuf wixxifataa jirti
Next articleJijjiirama dhufaa jiru dhugoomsuudhaaf jaarmayaaleen keenna siyaasa anamalee keessaa saffisaan bayuu qaban